PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: April 2010
မေ(၃၀)ဒီပဲယင်း နိူင်ငံတော် လုပ်ကြံမှုကြီး (၈၃)လပြည့် ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ်(တိုကျို)။
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဧပြီလ(၃၀)ရက်။
မေ(၃၀)ဒီပဲယင်း နိူင်ငံတော် လုပ်ကြံမှုကြီး (၈၃)လပြည့် ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်(လွတ်မြောက်နယ်မြေ)ဂျပန်ဋ္ဌာနခွဲ့ မှ ဦးဆောင်၍ တိုကျိုမြို့ရှီနာဂါဝါ အရပ်ရှိ မြန်မာစစ်အခွန်ရုံး(သံရုံး)ရှေ့ တွင် ယနေ့ ဧပြီလ (၃၀)ရက် နေ့ လည် ၃း၀၀ နာရီမှ ၄း၀၀ရီ အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဂျပန်နိူင်ငံသို့ခေတ္တရောက်ရှိလာသော ABSDF ဥက္ကဌ ရဲဘော်သံခဲမှ တက်ရောက် အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ယနေ့ အခမ်းအနားတွင် ဂျပန်နိူင်ငံရောက် မြန်မာနိူင်ငံသား စုစုပေါင်း ၁၀၀ ကျော် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။
သတင်းဓါတ်ပုံ။ Lian Khan Sum(CNC-Japan)
ပေါက်ပေါက်/ ၂၉ ဧပြီ ၂ဝ၁ဝ
တိုင်းရင်းသားအပစ်ရပ်အဖွဲ့များ နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရန် နအဖစစ်အစိုးရက နောက်ဆုံးရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့် ဧပြီ (၂၈) ရက် ကျော်လွန်လာခဲ့သော်လည်း တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ အပစ်ရပ်အဖွဲ့များ၏ နယ်မြေများတွင် စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှု မတွေ့ရသေးဘဲ နအဖ၏ တုံ့ပြန်လာနိုင်မှုကိုသာ စောင့်ကြည့်နေကြသည်။
ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် (UWSA) ဝတပ်ဖွဲ့၏ နယ်မြေအနီးနားတွင် နအဖစစ်တပ်များမှာ နဂိုအတိုင်း ရှိမြဲရှိနေပြီး စစ်ကြောင်းသွားလာလှုပ်ရှားမှု မရှိသေးသော်လည်း ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊ တန့်ယန်းမှတဆင့် သံလွင်မြစ်ကူး တာကော်အက်တံတားကို ဖြတ်ကျော်ကာ ဝဒေသသို့ ဝင်ရောက်သည့် ကုန်စည်များကို လွန်ခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းမှစ၍ ပိတ်ပင်ထားသည်ဟု ဝဒေသအား စောင့်ကြည့်နေသည့် တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် ဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “စစ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်မယ့် အရိပ်အယောင်တော့ မတွေ့ရသေးဘူး။ တာကော်အက် တံတားဘက်က ဝင်နေတဲ့ ကုန်တွေကိုတော့ ပိတ်လိုက်ပြီ။ ဒါပေမယ့် မိုင်းဖြန်၊ မိုင်းပေါက်တို့ဘက်က ဝင်လို့ရနေသေးတယ်။ ဝကတော့ ဘာမှလည်း ထပ်ပြီးတောင်းဆိုမနေတော့ဘူး။ အရင်တောင်းထားတဲ့ဟာက လျှော့ပေါ့ပြီး တောင်းထားတာ။ ဒါကိုလက်မခံတော့ နအဖဘက်က ဘာလုပ်လာမလဲဆိုတာဘဲ စောင့်နေကြတယ်” ဟု ပြောသည်။
ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း၊ အထူးဒေသ (၄)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တပ်မတော် (NDAA-ESS) တပ်ဖွဲ့ ဌာနချုပ် မိုင်းလားမြို့တွင်းသို့လည်း ကျိုင်းတုံမှ ကားများ ယနေ့အချိန်အထိ ဝင်နေဆဲဖြစ်ပြီး စစ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်မည့်ပုံမျိုး မရှိကြောင်း မိုင်းလားဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ဒီမှာတော့ အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ သင်္ကြန်ပွဲဆို စည်စည်ကားကား ကျင်းပခဲ့တာပဲကြည့်တော့။ မနေ့ကလည်း ဦးစိုင်းလင်းတို့နဲ့ တွေ့ဖို့ ကျိုင်းတုံက စစ်အရာရှိတွေ ထပ်ရောက်လာသေးတယ်လို့ ကြားတယ်။ တခုရှိတာက လူတွေတော့ နည်းသွားတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေလည်း ပြန်တဲ့ဟာ ပြန်တယ်။ စစ်တိုက်တာကတော့ နအဖ အပေါ်မှာ မူတည်တာပဲ။ နယ်ခံတွေကတော့ ပစ္စည်းရွှေ့တာ၊ ပြောင်းတာ မရှိဘူး” ဟု ပြောသည်။
ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ထိန်းချုပ်ရာ လိုင်ဇာဒေသတွင်လည်း စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှု မရှိသေးသကဲ့သို့ နအဖနှင့် ထပ်မံဆွေးနွေးရန်ရှိကြောင်း အမည်မဖော်လိုသည့် ကေအိုင်အို အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “နှစ်ဖက် ထပ်ဆွေးနွေးမယ်လို့သာ ကြားရပါတယ်။ အကြောင်းအရာကတော့ မသိပါဘူး။ (၂၈) ရက်နေ့ ကျော်လာရင် တိုက်မယ်ခိုက်မယ်ဆိုတာ ထင်သလို မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်ရေးထက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကိုသာ ပထမ ဦးစားပေးလုပ်မယ်ဆိုပြီး ကေအိုင်အိုက မူချထားပါတယ်၊ စစ်ပွဲတွေ ဖြစ်လာမှာကို မလိုလားဘူး။ ဒါပေမယ့် စစ်တိုက်နိုင်အောင်တော့ ပြင်ထားကြပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
နောက်ဆုံး သတ်မှတ်ရက်အထိ နယ်ခြားစောင့် အသွင်ပြောင်းရန် လက်မခံပါက အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးမတိုင်မီကာလက အခြေအနေအတိုင်း ပြန်ရောက်သွားမည်ဟု နအဖဘက်က အပစ်ရပ်အဖွဲ့များအား ပြောဆိုထားသော်လည်း ၎င်းတို့နယ်မြေများအတွင်း ယနေ့အထိ အခြေအနေ ငြိမ်သက်လျက်ရှိသည်။
နအဖက ယမန်နှစ် ဧပြီ (၂၈) ရက်မှစ၍ နယ်စပ်တလျှောက်ရှိ အပစ်ရပ်အဖွဲ့များအား နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ နယ်စပ်နှင့်ဝေးသည့် အပစ်ရပ်အဖွဲ့အား ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့အဖြစ်လည်းကောင်း အသွင်ပြောင်းခိုင်းခဲ့ရာ ကချင်ဒီမိုကရေစီသစ် တပ်မတော် (NDA-K)၊ ပိုင်စုံချိန် ဦးဆောင်သည့် ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့၊ ကယားအထူးဒေသ (၂) ကရင်နီ လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး (ကလလတ) နှင့် လားဟူပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တို့မှာ နယ်ခြားစောင့်တပ်ရင်းများအဖြစ် အသွင်ပြောင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ဦးလဆန်အောင်ဝါ ဦးဆောင်သည့် KIO ခွဲထွက်နှင့် ကချင်ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် (KDA) တို့မှာ ပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့အဖြစ် အသွင်ပြောင်းပြီး ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (SSA) မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့မှာလည်း ပြည်သူ့စစ်အသွင်ပြောင်းရန် သဘောတူထားပြီး ဖြစ်သည်။
နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရန် သဘောတူလက်ခံခြင်းမရှိသည့် အပစ်ရပ်အဖွဲ့များကိုမူ နအဖက နောက်ဆုံးရက် သတ်မှတ်ပေးထားကာ ခြိမ်းခြောက် ပြောဆိုမှုများ လုပ်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သတင်းမှတ်တမ်း။ မူရင်း khitpyaing.org,News
ကိုဝိုင်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဧပြီလ ၂၈ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၄၄ မိနစ် .
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်နှင့်အတူ ဝန်ကြီး ၂၂ ဦးသည် စစ်ဘက်ရာထူးများကို ယခုလ ၂၆ ရက်နေ့မှ စတင်၍ စွန့်လွှတ်လိုက်ကြသည်။
ဝန်ကြီးချုပ် အပါအဝင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ဋ္ဌေးဦး (ကြံ့ဖွံ့ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး)၊ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်မင်း၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်နိုင်သိန်း၊ အမှတ် (၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်း၊ အမှတ် (၂) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ခင်မောင်မြင့်၊ ပြည်ထဲရေး ဒုဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဘုန်းဆွေတို့ အဆိုပါ အစုအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သည်ဟု မဇ္ဈိမက စုံစမ်းသိရှိထားသည်။
ယခုသတင်းကို စစ်အစိုးရက ကြေညာခြင်း မရှိသော်လည်း ယနေ့ထုတ် သတင်းစာများတွင် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်ဟု စတင်အသုံးပြုလာသည်ကို တွေ့ရသည်။
အတိုက်အခံများနှင့် လေ့လာသူများက ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ခြေလှမ်းတခုအဖြစ် သုံးသပ်လိုက်ကြပြီး ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်မှုများကို မကြာခင်တွင် ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် လုပ်လာကြလိမ့်မည်ဟု ဆိုသည်။
ကျန်ဝန်ကြီးများနှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးများ ပါဝင်သော နောက်တသုတ်လည်း စစ်ဘက်ရာထူးမှ နုတ်ထွက်မှု ရှိလာလိမ့်မည်ဟုလည်း စစ်ဘက်သတင်းရပ်ကွက်တခုက ပြောသည်။
၂ဝဝ၈ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေအရ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်များတွင် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း အလိုအလျောက် ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
စစ်သားများက အရပ်ဘက်သို့ ပြောင်းလိုက်လျှင် စစ်ဘက်ကိုယ်စားလှယ် ကဏ္ဍအောက်မှ မဟုတ်သောကြောင့် စစ်အစိုးရအတွက် ပါလီမန်တွင် နေရာများ ပိုမိုရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
သတင်းမှတ်တမ်း ။ မူရင်း (မဇ္ဈိမ)
ဒီကေဘီအေနှင့် နအဖ ထိပ်တိုက်တွေ့ နယ်မြေမကျော်ရန် သတိပေးထား ။
ရဲရင့်/ ၂၇ ဧပြီ ၂ဝ၁ဝ
နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းရန် နအဖနှင့်သဘောတူညီမှု ရရှိထားသည့် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်မတော် (ဒီကေဘီအေ) အဖွဲ့နှင့် နအဖ တပ်တို့သည် ယမန်နေ့က ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်း ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင် တင်းမာမှုတရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ် ထိုင်းနယ်စပ်အနီးရှိ ဖလူးကျေးရွာတွင် ယမန်နေ့နံနက်၌ နအဖအမှတ် (၉) ကွပ်ကဲရေး ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ ခလရ (၁၀၆) တပ်ဖွဲ့သည် ရွာသားများအား လက်နက်များဖြင့် ချိန်ရွယ်ကာ ခြိမ်းခြောက်မှုများ ပြုလုပ်သောကြောင့် ၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် နှစ်ဖက် ပစ်ခတ်လုနီးပါး ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ဒေသအခြေစိုက် ဒီကေဘီအေ အမှတ် (၅) တပ်မဟာမှူး စောလားပွယ် (ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေး) က ပြောသည်။
သတင်းမှတ်တမ်း ။ cc _ khitpyaing.org/news
စစ်ယူနီဖောင်းကနေ အရပ်ဝတ် ပြောင်းဝတ်တာသာဖြစ်ပြီး အခု အစိုးရအဖွဲ့ ရာထူးတွေကတော့ ဒီအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်လို့ အမည်မဖော်လိုသူ အစိုးရ အရာရှိတယောက်က ပြောပါတယ်။
အစိုးရ သတင်းမီဒီယာတွေကတော့ ဒီသတင်းကို အတည်ပြု ဖော်ပြတာ မတွေ့ရသေးပါဘူး။ စစ်ရာထူးတွေကနေ အနားယူတဲ့ သတင်းတွေ လာပါဦးမယ်၊ ဒါက ပထမအသုတ် ဖြစ်ပါတယ်လို့ သတင်းပေးသူက ဆိုပါတယ်။
စစ်ထွက် ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ တရပ်ကို မကြာမီ မှတ်ပုံတင်မယ်လို့ အများက မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။
စစ်တပ်လိုလားတဲ့ အစိုးရတရပ်ဟာ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ထွက်ပေါ်လာပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့ အာဏာချုပ်ကိုင်မှုကို ပိုမို ခိုင်မာစေလိမ့်မယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲကို ဝေဖန်သူတွေက ပြောကြပါတယ်။
သတင်းမှတ်တမ်း။ မူရင်း voanews.com
Nuclear Free Burma ဖေါ်ဆောင်ရေး Signature Campaign လှုပ်ရှားမူကို ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမျူးချုပ်ထံပေးပို့ ရန်ပြင်ဆင်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဧပြီလ (၂၆)ရက်။
နျူကလီးယားကင်းစင်သော မြန်မာနိူင်ငံ Nuclear Free Burma ဖေါ်ဆောင်ရေး Signature Campaign လှုပ်ရှားမူ ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလမှစတင်၍ FTUB ဂျပန် ကော်မတီမှ ဦးစီးကောက်ခံလာခဲ့ရာ ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့ တွင် ကောက်ခံထားသည့် လက်မှတ်များကို စုစည်းပြီး FTUB နာယက Dr.မင်းညို ထံ လွှဲအပ်သည့် အစီအစဉ်ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
FTUB(Japan) ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်ဆွေအေးမှ Signature Campaign လှုပ်ရှားမူနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းပြရာမှာ မြန်မာနိူင်ငံသည် သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ်များ ပိုင်ဆိုင်သည့် နိူင်ငံများအနက် နံပါတ်(၉)အဆင့်တွင် ရှိပြီး Hydro power ရေအားလျှပ်စစ်ဖြင့် စီမ်းအင်မဂ္ဂါဝပ် အမြောက်အများထုတ်လုပ်နိူင်သော နိူင်ငံဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ် ရေအား လျှပ်စစ်စွမ်းအင် နှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ များမှ ရောင်းချရငွေသည်လည်း မြန်မာနိူင်ငံ၏ နှစ်စဉ် ၀င်ငွေ၏ ၅၀% ကျော်ရရှိလျက်ရှိသည်။
ထိုကြောင့် နအဖ မှ စွမ်းအင်လုံလောက်မှု မရှိဟုသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် နျူကလီးယား စွမ်းအင်ကို ထုတ်လုပ်ရန် ကြိုးပမ်းမှုမှာ လက္ခံ ယုံကြည်နိူင်ဘွယ်ရာ မရှိသည့်အပြင် နျူကလီယား စွမ်းအင်မှတဆင့် နျူကလီယား လက်နက်ပိုင်ဆိုင်သော နိူင်ငံဖြစ်ရန် လုပ်ဆောင်နေခြင်း၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ် သက်ဆိုးရှည်စေရန် လုပ်ဆောင်နေသည့်အတွက် အခုလို Signature Campaign လှုပ်ရှားမူကို လုပ်ဆောင်ရကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားသွားပါသည်။ ဂျပန်နိူင်ငံတွင် Sign Campaign ပြုလုပ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ အနျူမြူ၏ ဆိုးကျိုးကို ဂျပန်လူမျိုးတို့ကိုယ်တိုင် ခံစားခဲ့ကြရပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်း နျူကလီးယား လက်နက်လျော့ချရန် နျူကလီယားအဆိပ် အတောက် ကင်းရှင်းရန် ကြိုးစားနေသော နိူင်ငံဖြစ်သည့်အတွက် ဂျပန်နိူင်ငံတွင် လှုပ်ရှားမှုကို စတင်ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်သည်။
နိူင်ငံတော်ဘတ်ဂျက် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းထောင်ချီ အကုန်ကျခံနေခြင်းသည် နျူကလီးယားစွမ်းအင်မှ ရရှိလာမည့် အကျိုးကို ပြည်သူများ စံစားနိူင်မည်မဟုတ်၊ နျူကလီးယားနှင့်ပတ်သက်သည့် ခေတ်မှီနည်းစနစ်ဖြစ် ထိမ်းသိမ်း ဆောက်ရှောက်မှု ၊ ဘေးထွက်စွန့် ပစ် ပစ္စည်းများကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အန္တရာယ် အလွန်စိုးရိမ်ရကြောင်းနှင့် နျူကလီယား စွမ်းအင်ကို ကန့် ကွက်နေသည်မဟုတ် နအဖမှ နျူကလီယား လက်နက်ပိုင်ဆိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေခြင်းကို ကန့် ကွက်ရကြောင်းကို FWUBC ဒု ဥက္ကဋ္ဌ ကိုဘုန်းလှိုင်မှ ထောက်ပြ ပြောဆိုသွားပါသည်။
ဂျပန်နိူင်ငံရောက် မြန်မာနိူင်ငံသားများ၊ ဂျပန်ပြည်သူများ နှင့် ဂျပန်အလုပ်သမားသမဂ္ဂများထံမှ စုစုပေါင်းလက်မှတ် (တစ်သေါင်း)ကျော် ကောက်ခံရရှိထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။ လာမည့် ၂၉ ရက်နေ့ ဂျပန်အလုပ်သမားနေ့ (မေဒေး)နေ့နောက်ဆုံးထား ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကောက်ခံရရှိထားသည့် လက်မှတ်များကို ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမျူးချုပ်နှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ နိူင်ငံများသို့ပေးပို့ သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်အစိုးရကို တိုက်တွန်း တင်ပြသွားနိူင်ရန်အတွက် FTUB ဗဟိုနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး ဂျပန်ရောက် အင်အားစုများနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး ပိုမိုကျယ်ပြန့် သည့် လှုပ်ရှားမူကို ဆက်လက်ဖေါ်ဆောင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Posted by PNSjapan at 9:59 PM0comments
AUN-Japan လပတ်အစည်းဝေး နှင့် ABSDF ဥက္ကဋ္ဌ ရဲဘော် သံခဲ နှင့် တွေ့ ဆုံပွဲ ။
ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း။ Naung Min Thein(PMNS-Japan) Part-1 & Part-2
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၅ ရက်။
ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ အစည်း(ဂျပန်)AUN-Japan မှ ဧပြီလ ပုံမှန်လပတ် အစည်းအဝေးကိုToshima ku Minami Otsuka ၌ ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့ တွင် ညနေ ၁၈း၃၀ နာရီ မှ ၂၁း၃၀ အထိ နှစ်ပိုင်းခွဲကာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမပိုင်းအစီစဉ်မှာ လစဉ် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များကို အပြန်အလှန် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြပြီးသည်နောက် (၆၃)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စု အခမ်းအနားတွင် လူအား၊ ငွေအား ဖြစ် ပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီခဲ့ကြသော AUN-Japan အဖွဲ့ ဝင်များအား မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုလွှာများကို ဥက္ကဋ္ဌ စိုင်းစီဝမ်းမှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါငည်။
ဒုတိယပိုင်း အစီအစဉ်၌ ဂျပန်နိူင်ငံသို့ခေတ္တရောက်ရှိလာသော ABSDF ဥက္ကဋ္ဌ ရဲဘော်သံခဲ မှ မြန်မာနိူင်ငံ၏ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော နိူင်ငံရေး အကျပ်အတည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး တိုင်းရင်းသားဒေသ အသီးသီးတို့ ၌ အနှစ် ၂၀ ကျော်အတွင်း ဖြတ်သန်းခဲ့သော မိမိဘ၀ အတွေ့ အကြုံများကိုပါ ရှင်းလင်း ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြပြီး အစည်းဝေးကို ည ၂၁း၃၀ နာရီတွင် အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံ ။ Lian Khan Sum(CNC-Japan)
သျှမ်းပြည်တပ်မတော်ဟုဆိုကာ တောင်ပိုင်း ၀ တပ်ဖွဲ့အား နအဖ စတင်တိုက်ခိုက် ။
Saturday, 24 April 2010 22:00 သျှမ်းသံတော်ဆင့် .
တရုတ်နယ်စပ် အပစ်ရပ်အဖွဲ့များ စစ်ရေးပူးပေါင်းမှု ဆွေးနွေး ။
ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီ ၁၆ ရက်က ကချင်ပြည်နယ် လိုင်ဇာမြို့တွင် KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - AP)
ရန်ပိုင် Thursday, April 22, 2010 .
နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်အစိုးရက စစ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်ခဲ့လျှင် တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ရှိ အပစ်ရပ် အဖွဲ့ များကြား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးပွဲ တရပ်ကို ယမန်နေ့က ပန်ဆန်းမြို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲသို့ ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA )၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ် တပ်မတော် (NDAA) မိုင်းလား အဖွဲ့၊ ၀ပြည် သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး အဖွဲ့ (UWSA) ၊ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် (မြောက်ပိုင်း) (SSA-N) တပ်ဖွဲ့တို့ တက်ရောက်၍ စစ်ရေး ဆိုင်ရာများ ဆွေးနွေးကြောင်း UWSA အရာရှိတဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ကိုးကန့် ကိစ္စကို သင်ခန်းစာ ယူပြီးတော့ အဲ့သည်လိုမျိုး မဖြစ်အောင် ဘယ်လို ကြိုတင် ကာကွယ် စီမံမှုတွေ လုပ်ထားတယ်၊ တပ်ပေါင်းစု ပုံစံမျိုး ခုခံဖို့ပဲ”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ထို့အပြင် UWSA အဖွဲ့၏ လက်ရှိ ရပ်တည်ချက်မှာ ယခင်က တောင်းဆို ထားသကဲ့သို့ပင် ဖြစ်ကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဆက်လက် စောင့်ထိန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလည်း ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ အရာရှိက ပြော သည်။
UWSA အဖွဲ့မှ တောင်းဆိုခဲ့သည့် အချက်များမှာ မိုင်းပေါက် နှင့် မိုင်းဖြန် ဒေသကို ပေါင်း၍ မိုင်းပေါက်မြို့နယ် အဖြစ်သတ်မှတ် ပေးပြီး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ၀ တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း ထည့်သွင်းပေးရန်၊ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိ ၀မ်ဟုန် စစ်ဒေသကို စစ်တိုင်း ကြီး အဖြစ်သတ်မှတ် ပေးရန်၊ အဆိုပါ စစ်တိုင်းကြီးများ၏ စစ်ဒေသမှူးနှင့် စစ်ဦးစီးမှူးကို UWSA တပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ယူ၍ ဒုတိယ စစ်ဦးစီးမှူးများကို စစ်အစိုးရဘက်မှ တာဝန်ယူရန်၊ တပ်ဖွဲ့များကို ၀ တပ်သားများဖြင့်သာ ဖွဲ့စည်းရန်တို့ဖြစ်သည်။
သျှမ်းသံတော်ဆင့်သတင်းစဉ်မှ ဦးစိန်ကြည် က“စစ်အစိုးရက လက်နက်ကြီးများနဲ့ စားနပ်ရိက္ခာ ယာဉ်တန်းတွေ ရှမ်းပြည်မြောက် ပိုင်း ကွမ်းလုံ၊ တန့်ယန်း နဲ့ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ကျိုင်းတုံဒေသတွေကို ပို့နေတယ်”ဟုဆိုသည်။
UWSA အဖွဲ့ကလည်း စစ်အစိုးရတပ်များနှင့် ထိတွေ့နေသည့် ဒေသများတွင် လက်နက် ခဲယမ်းများ၊ စားနပ်ရိက္ခာများကို ဖြည့်တင်း မှုများ ပြုလုပ်ထားကြောင်း ဦးစိန်ကြည်က ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
စစ်အစိုးရတပ်များ နှင့် ရင်ဆိုင်ထားသည့် ဒေသများမှာ တန့်ယန်းဒေသနှင့် ကပ်လျှက်ရှိသည့် မန်ဆန်ဒေသ၊ ကွမ်းလုံ၊ ဟိုပန်ဒေသ၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ် အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိ မိုင်းပေါက် မိုင်းဖျန်ဒေသ နှင့် သံလွင်မြစ်အရှေ့ဘက်ကမ်းရှိ မော်ဖဒေသတို့ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် အင်္ဂါနေ့က စစ်အစိုးရတပ်များ စစ်ကား အစီး ၅၀ကျော်နှင့် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းသို့ တက်သွားကြောင်းမိထ္တီလာမြို့ခံတဦး ကလည်းဆိုသည်။
၀နယ်မြေရှိ ဒေသခံတဦးကမူ“ဒီမှာကတော့ အားလုံး ပုံမှန်အတိုင်းပဲ၊ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားမရှိပါဘူး၊ စီးပွားရှာတဲ့သူကရှာပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် တကယ်ဖြစ်လာလို့ တပ် ကဦးဆောင်ပြီးတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ တိုက်ရမှာပေါ့”ဟု ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။
မကြာသေးမီက ၀နယ်မြေမှ ပြည်မသို့ ပြန်သွားသည့် အစိုးရ၀န်ထမ်းများကိုမူ UWSA အဖွဲ့က ပြန်လာခွင့် မပေးကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောပြသည်။ စစ်အစိုးရနှင့် UWSA အဖွဲ့ကြားတွင် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရန် နည်းပါးကြောင်း၊ စစ်အစိုးရအနေဖြင့် ကိုးကန့်အရေး ကဲ့ သို့ အင်အားနည်းသည့် နေရာတွင်သာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လိမ့်မည်ဟု ၀တပ်ဖွဲ့ မှ အရာရှိတချို့က သုံးသပ်ကြောင်း ဦးစိန်ကြည် က ပြောသည်။
ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့(KIO)နှင့် စစ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များ ယနေ့ မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြောင်း၊ စစ်အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်နှင့် အတူ ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်လည်းပါဝင်ကြောင်း လိုင်ဇာ အခြေစိုက် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့မှ အရာရှိတဦးက ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။
စစ်အစိုးရက အပစ်ရပ်အဖွဲ့များကို နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ယနေ့ နောက်ဆုံး သတ်မှတ်ထားပြီး လာမည့် ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့ ကျော်လွန်လျှင် မတရားအသင်း အဖြစ်ကြေညာမည်ဖြစ်သည်။
မတရားသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေနှင့် ကျင်းပမည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအား ချီတက်ကန့် ကွက်ဆန္ဒပြပွဲ(တိုကျို)။
ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း။ မူရင်း (nldlajb.blogspot.com)
ယနေ့ဧပြီလ(၂၂)ရက်နေ တိုကျိုမြို့မှာ မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ မတရားသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေနှင့် ကျင်းပမည့် ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲအား ဆန့် ကျင်ကန့့် ကွက်သည့် ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲ အခမ်းအနားကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ) ဂျပန်ဌာနခွဲ့ မှဦးစီး ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ(ဓာတ်ပုံ - NMSP)
ဧရာဝတီ Wednesday, April 21, 2010 .
NMSP ၏ တရားဝင် စာရင်းများအရ အဖွဲ့ဝင် ၃၅၀၀ ရှိသော်လည်း လက်ရှိတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသူမှာ ၇၀၀ ခန့် သာ ရှိကြောင်း သိရသည်။
သို့သော် အပစ်ရပ်ထားသည့် ဆယ်စုနှစ် တခုကျော်ကြာအတွင်း မြို့ပေါ်၌ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများနှင့် အခြေကျနေသည့် ပါတီ အဖွဲ့ဝင်များအဖို့ လက်ရှိအခြေအနေကို စွန့်လွှတ်၍ NMSP နှင့် တောတွင်းသို့ လိုက်ပါပူးပေါင်းရန် အခက်အခဲရှိမည်ဟု မွန် နိုင်ငံရေး လေ့လာ အကဲခတ်သူများက ဆိုသည်။
သတင်းမှတ်တမ်း ။ မူရင်း irrawaddy.org,News
စစ်အုပ်စု၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ဆိုးဝါးနိမ့်ကျနေသော တအာင်းဒေသရှိ ပညာရေး စနစ်အပေါ် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် ။
တအာင်း လူငယ်များ၏ ယနေ့ထုတ်ပြန်သည့် အလင်းမဲ့ဘဝ ပညာရေး အစီရင်ခံစာသည် စစ်အုပ်စု၏ ထိန်းချူပ်မှုအောက် ဆိုးဝါးနိမ့်ကျ နေသော ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းရှိ တအာင်း လူမျိုးတို့ ပညာရေး စနစ်အကြောင်းကို အများပြည်သူ သိရှိစေရန် ထုတ်ဖော်ထားပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း နမ့်ဆန်၊ နမ့်ခမ်းနှင့် မန်တုံ စသည့် မြို့နယ်သုံးမြို့နယ်မှရွာပေါင်း ၆၁ ရွာတွင် လူဦးရေ ၁၇၅ ဦးတို့ကို တွေ့ဆုံ မေးမြန်းမှူအပေါ် အခြေခံပြီး အချက်အလက်များ ကောက်ယူခဲ့ပါသည်။
တအာင်း ကျောင်းသားနှင့် လူငယ်များအစည်းအရုံး၏ ယခုအစီရင်ခံစာသည် စစ်အုပ်စု၏ တာဝန်မဲ့မှု၊ ပညာရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း ကင်းမဲ့နေမှု များကြောင့် တအာင်း ပြည်သူလူထုတို့၏ဘဝ အနာဂတ်မဲ့ နေကြရသည်ကို အချက်အလက် စုစည်း တင်ပြထားပါသည်။ တအာင်းဒေသတွင် စာသင်ကျောင်း အနည်းငယ်သာရှိပြီး ကျောင်းသုံးပစ္စည်းလည်း မပြည့်စုံပါ။ နအဖ စစ်အုပ်စုသည် အရည်အချင်း ပြည့်ဝသော ဆရာများထားရှိခြင်း၊ ဆရာများကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း၊ ပညာရေးသင်ထောက်ကူများ ပံ့ပိုးခြင်း အစရှိသည့် ပညာရေးဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပြုလုပ်ရာတွင် မရှိသလောက် အလွန်နည်းပါသည်။ ကျောင်းသင်ထောက်ကူပစ္စည်းအတွက် ပညာသင်ကြားသည့် တအာင်းကျောင်းသား လူငယ်များထံသာ ကောက်ခံခဲ့ကြပါသည်။
ကျောင်းတကျောင်းတွင် ၂ဝဝဝ ခုနှစ်တွင် စတင်ပညာ သင်ကြားခဲ့သော ကျောင်းသူ/သား ၁၇၂ ဦးသည် ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ရောက်သောအခါ ကျောင်းသူ /သား ၃ ဦးခန့်သာ ဆယ်တန်းအထိ ရောက်ရှိသင်ကြားနိုင်ခဲ့သည်ကို အစီရင်ခံစာ အတွက် လေ့လာ သုတေသန ပြုသည့် အဖွဲ့မှ လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ ထိုအတူ ပညာရေး သင်ရိုးညွန်တမ်းတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအား ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုများကို တရားဝင်လေ့လာသင်ယူခွင့်ကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားပြီး စာသင်ကျောင်းများတွင်လည်း မြန်မာစာ ကိုသာ အခြေခံ အသုံးပြု၍ သင်ကြားနေသည်။
နအဖ စစ်အုပ်စုသည် ပြည်သူလူထု၏ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးထက် စစ်အင်အား ပြင်ဆင်တိုးချဲ့ရေးတွင် နိုင်ငံ့ဘဏ္ဌာငွေကို အဆ ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုထားပြီး၊ နိုင်ငံထွက်ကုန်တန်ဖိုး (ဂျီဒီပီ) ၏ ၁.၄ ရာခိုင်းနုန်းသာ ပညာရေးနှင့် ကျန်မာရေးအတွက် သုံးစွဲသည် ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ပညာသင်ကြားသော ကျောင်းသား လူငယ်များမှာ အတင်းအဓမ္မ လုပ်အားပေးခိုင်းစေခြင်း၊ ကြံ့ခိုင်ရေးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အတင်း သွတ်သွင်းခြင်းအပြင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများစွာ ခံစားနေကြရသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။
ပညာရေးအခြေအနေမှာ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးအရ အဘက်ဘက်တွင် ဆိုးရွားစွာ ဆက်လက် ဖိနှိပ်ချိုးနှိမ်ခံထားရပါသည်။ စာသင်ကျောင်းတွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာသင်ယူခဲ့သည့် ကျောင်းသား တစ်ယောက်အတွက် ဆက်လက်ပြီး တဆင့်မြှင့် ပညာသင်ကြားရန် အခြေအနေလုံးဝ မရှိသလောက် နည်းပါးလှပါသည်။ “ကျနော်သင်ကြားခဲ့တဲ့ ပညာရေးဟာ ကျနော်လုပ်နေတဲ့အလုပ်နဲ့ ဘာမှ မဆက်စပ် ပါဘူး။ တက္ကသိုလ် မှာ ဥပဒေပညာကို သင်ယူခဲ့ပြီး အခုလက်ဖက်ရောင်းနေပါတယ်။ ပညာရေးဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ အနာဂတ်အတွက် အာမခံချက်လုံးဝ မရှိဘူး။ အခုပညာရေး စနစ်ဟာ အစိုးရကို ကြောက်လန့်အောင်၊ အမိန့်နာခံအောင်ပဲ သင်ပေးပါတယ်။ လာဘ်စားမှု တွေလဲ အင်မတန်များပါတယ်” ဟု အစီရင်ခံစာအတွက် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခံခဲ့သူ လူငယ်တဦးပြောပြပါသည်။
“နအဖ စစ်အုပ်စု ရဲ့ ပညာရေး စနစ်ကို အချိန်မှီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမလုပ်ဘူးဆိုရင် ပညာရေးဟာအလျှင်အမြန် ယိုယွင်း ပျက်ဆီး သွားမှာဖြစ်ပါတယ်၊ ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေရဲ့ ပညာရေးအခြေအနေဟာ ဘတ်ဂျတ် မရှိလို့ကျောင်းပိတ်တာ၊ဘတ်ဂျတ် ငွေကြေး မတတ်နိုင်လို့ ကျောင်းထွက်ရတာ၊ ပညာရေးအတွက် အခြားဘာမှ ရွေးချယ်စရာ အခွင့်အလမ်းမရှိတော့တာတွေဟာ လုံးဝစိတ်ဓါတ် ကျဆင်းစရာဖြစ်နေပါတယ်” ဟု တအာင်းတအာင်းကျောင်းသားနှင့်လူငယ်များ အစည်းအရုံး၏ ပညာရေးဌာန တာဝန်ခံ မိုင်းမောဝ်ဒါင်း မှ စစ်အုပ်စု၏ မှားယွင်းသော ပညာရေးစနစ်ကို အချိန်မှ ပြုပြင်ရန် ထောက်ပြ ပြောဆိုထားပါသည်။
Mai Mao Dang -၆၆-ဝ၈၇ ၅၂၄ ၆ဝ၇၂
Mai Aung Ko – ၆၆-၀၈၀ ၁၁၈၄၄၇၉
သတင်းမှတ်တမ်း ။ www.palaungland.org
နယ်ခြားစောင့်တပ် လက်မခံရသည့်အကြောင်း ကေအိုင်အို လူထုအား အသိပေးပြောကြား။
ခိုင်လင်း/ ၁၉ ဧပြီ ၂ဝ၁ဝ
နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေးကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (ကေအိုင်အို) က လူထုအား အသိပေးရှင်းလင်းသည့် အခမ်းအနားတခုကို ကေအိုင်အို ဗဟိုဌာနချုပ်ရှိရာ လိုင်ဇာမြို့တွင် ယခုလ (၁၆) ရက်၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကေအိုင်အို နှင့်နအဖအကြား နှစ်ဘက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးချက်များ၊ ကေအိုင်အိုဘက်က တင်ပြထားချက်များ၊ နအဖဘက်က ကမ်းလှမ်းထားချက်များနှင့် အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး စာချုပ်တို့ကို နံရံကပ်စာစောင်ဖြင့် ပြသထားသကဲ့သို့ ကေအိုင်အို အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာလဂျာက ကချင်ဘာသာဖြင့် ပြောကြားပြီး တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးက မြန်မာဘာသာပြန်၍လည်းကောင်း၊ ကေအိုင်အို ဒု-စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ဂွမ်မော်က မြန်မာ၊ ကချင် နှစ်ဘာသာဖြင့် လည်းကောင်း နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေး ကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းသွားခဲ့သည်ဟု အခမ်းအနား တက်ရောက်ခဲ့သူ ကေအိုင်အို အုပ်ချုပ်ရေး အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “အရပ်သားတွေ၊ ကေအိုင်အိုဌာနဆိုင်ရာအရာရှိတွေ၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ (၁,ဝဝဝ) ကျော်လောက် တက်တယ်။ မေးမြန်းချင်တာရှိရင် ပြန်မေးလို့ ဖိတ်ခေါ်တယ်။ ကချင်လိုကော၊ မြန်မာလိုကော အကျယ်တဝင့် ရှင်းသွားတယ်။ ပြီးတော့ နံရံကပ်စာစောင်မှာလည်း သူတို့ရှင်းလင်းပြောပြတာတွေကို ထုတ်ပြထားတယ်။ နယ်ခြားစောင့်တပ်ကို ဘယ်လို ဖွဲ့စည်းမယ်၊ လစာနဲ့ရိက္ခာ ဘယ်လိုထုတ်ပေးမယ် ဆိုတာကအစ ရေးထားတယ်။ အခုလို ရှင်းပြလိုက်တော့ လူထုတွေအနေနဲ့ ကေအိုင်အိုက နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းရေးကို ဘာကြောင့် လက်မခံသေးသလဲဆိုတာ သိခွင့်ရပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်တွင် နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းရေးကိစ္စ မပါဝင်ပုံ၊ နောင်တက်လာမည့် အစိုးရနှင့်သာ နိုင်ငံရေးကိစ္စဆွေးနွေးရန် နအဖဘက်က ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်အထိ တစိုက်မတ်မတ်ပြောလာခဲ့ပုံ၊ အမျိုးသားညီလာခံအတွင်း ကေအိုင်အိုအဖွဲ့၏ တင်ပြချက်များ အလေးထား မခံခဲ့ရပုံ အပါအဝင် နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေး နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးချက်များကို ကေအိုင်အို ဒု-စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ဂွမ်မော်က အခမ်းအနားတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းက “ကျနော်တို့ နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးနေတာ (၁၅) ကြိမ်ရှိပါပြီ။ (၁၅) ကြိမ်စလုံးမှာ တပ်မတော်အစိုးရက ကျနော်တို့ကို ပြောနေတာကတော့ ဘီဂျီအက်ဖ်ကို လက်ခံရေးပဲဖြစ်တယ်။ အဲဒီ (၁၅) ကြိမ်စလုံးမှာ ကေအိုင်အို ပြန်ပြောနေတာက ဘီဂျီအက်ဖ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ တခြားသော နည်းလမ်းနဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရေးဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ကေအိုင်အိုအဖွဲ့အား နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းရန် နအဖက ယခုလ (၂၈) ရက် နောက်ဆုံးရက် သတ်မှတ်ထားပြီး သူတို့အနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်အတွင်း တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့်သာ အသွင်ပြောင်းလိုကြောင်း ယခုလ (၁၅) ရက်က ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်ထံ စာရေးတင်ပြကမ်းလှမ်းထားသည်ဟု ဗိုလ်မှူးချုပ် ဂွမ်မော်က ပြောသည်။
ယခုရှင်းလင်းပွဲတွင် ကေအိုင်အိုအဖွဲ့က နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းရေးကို အဘယ်ကြောင့် လက်မခံခြင်းဖြစ်ကြောင်း လူထုအား အသိပေးပြောကြားကာ နအဖဘက်မှ တဖက်သတ် လုပ်ဆောင်နေမှုများကိုလည်း ရှင်းလင်းပြခဲ့ကြောင်း စစ်ရေးအကဲခတ်တဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “လျှို့ဝှက်ထားတဲ့ သူတို့ရဲ့ အပစ်ရပ်စာချုပ်တွေ၊ နအဖဆီကို ရေးတဲ့စာတွေ လူထုကို ပြသလာတာက နအဖက တဖက်သတ် အကျပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေတာတွေကို သည်းမခံနိုင်တာလည်းပါတယ်။ တဖက်က သူတို့ ရပ်တည်ချက် မှန်တယ်ဆိုတာကို လူထုကို ရှင်းပြချင်တယ်။ တချိန်တည်းမှာ လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကို ရယူချင်တာလည်း ဖြစ်တယ်” ဟု ပြောသည်။
သတင်းမှတ်တမ်း ။ မူရင်း khitpyaing.org/
နအဖစစ်အစိုးရ၏ ရာဇ၀တ်မှုများကို ပြည်သူ့တရားရုံးတင် တရားစွဲဆိုနိုင်ရေး ဂျပန်ရှိဒီမိုကရေစီအင်အားစုများပြင်ဆင် ။
အမျိုးသမီးများအပေါ် ကျူးလွန်ထားသည့် နအဖစစ်အစိုးရ၏ ရာဇ၀တ်မှုများကို ပြည်သူ့တရားရုံးတင် တရားစွဲဆိုနိုင်ရေး ဂျပန်ရှိဒီမိုကရေစီသမားများပြင်ဆင်
နအဖစစ်အစိုးရမှ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနှင့် တိုင်းရင်းသား အမျိုးသမီးငယ်များအပေါ် မတရား ကျူးလွန်ထားသည့် ပြစ်မှုများ(Criminal Case)များကို ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပြည်သူ့တရားရုံးဖွဲ့စည်း၍ ရုံတင်စစ်ဆေး တရားစွဲဆိုနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ကြိုးစား နေကြောင်းသိရသည်။
ဂျပန်ရှိ မြန်မာအမျိုးသမီးသမဂ္ဂ၏ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ချိုချိုအေးမှ ဦးဆောင်၍ နအဖစစ်အစိုးရ၏ အမျိုးသမီးများအပေါ် ကျူးလွန်သော ရာဇ၀တ်မှုများနှင့် ပတ်သတ်၍ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပြည်သူ့ တရားရုံးကျင်းပရေးကော်မတီဟု အမည်ပေးထားသည့် အလုပ်ကော်မတီ တခုကို တိုကျိုမြို့ အိုးစုခအရပ်ရှိ မိနားမိအိုးစုခခန်းမ၌ ပြုလုပ်သော အစည်းအဝေးတွင် ဂျပန်ရှိ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူများနှင့် စုပေါင်း ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီး လာမည့်ဇွန်လတွင် တရားခွင်ပြုလုပ်၍ ကြားနာ စစ်ဆေးကြမည်ဟုဆိုသည်။
ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ချိုချိုအေးက“ဒါမျိုးလုပ်လိုက်လို့ စစ်အစိုးရက ချက်ခြင်ကြီးပြုတ်ကျသွားမယ်လို့ မဆိုလိုဘူး။ နအဖ ပြုတ်ကျ သွားနိုင်လောက်အထိလဲ ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်၊ မဖြစ်ချင်လဲ မဖြစ်ဘူး၊ ဘာတွေ အကျိုးကျေးဇူးရှိမလဲဆိုတော့ ကျမတို့အပေါ်လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တာတွေက ပါးစပ်နဲ့ဘဲပြောလို့ရတယ်၊ နအဖ မကောင်းကြောင်းကို တကမ္ဘာလုံးကသိတယ်၊ သိပေမဲ့ ဒီလို အထောက်အထား အချက်အလက်နဲ့ မပြောနိုင်တဲ့အခါမှာ ပြောရင်း ပြောရင်းနဲ့ လေထဲမှာဘဲ ပျောက်သွားတယ်၊ ဒီတော့ ဒီလိုအထောက် အထားနဲ့ပြောနိုင်မယ်ဆိုရင် ဒီမှတ်တမ်း မှတ်ရာတွေဟာ သမိုင်းဝင် အဖြစ်လဲကျန်ခဲ့မယ်၊ ဒီကနေချက်ခြင်း အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိတောင် သမိုင်းမှာ ဒါတွေဟာ ဖျောက်ဖျက်လို့ မရနိုင်ဘူး”ဟု အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ပုံနှင့် ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းပြသွားသည်။
ယနေ့တွင် ကော်မတီဖွဲ့စည်း လိုက်ကြခြင်းသာဖြစ်ပြီး အခြေအနေအရ တရားခွင်၏ ဂျူရီလူကြီးများ၊ တရားသူကြီးများအဖြစ် စစ်မေးမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များကို အကြမ်းဖြင်းအားဖြင့် လျာထားခြင်း သာဖြစ်သည့်အတွက် တရားဝင် မထုတ်ပြန်နိုင်သေးကြောင်းနှင့် တရားခွင်တွင် စစ်မေးခံမည့် သူများမှာ နအဖစစ်အစိုးရက အမှန်တကယ် ညှင်းပန်းနှိပ်စက် မတရားပြုကျင့်ခြင်းကို ခံထားရပြီး ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တွင် ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေသည့် အမျိုးသမီးငယ်များ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ဆက်လက်ပြီး ဒေါ်ချိုချိုအေးက“ကျမတို့တိုင်းပြည်ထဲမှာ တရားဥပဒေမစိုးမိုးလို့ အခြားနိုင်ငံကို ထွက်ပြီးတော့ တရားရုံးတောင် လုပ်ယူရတယ်ဆိုတာ သမိုင်းမှာကျန်ခဲ့တာဘဲ၊ နောက်တချက်ကလဲ ကျမတို့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရတာကိုလဲ ဘယ်သူ့ပြောရမှန်းမသိ၊ ဘယ်သူမှလည်း အကာအကွယ် မပေးနိုင်တဲ့ဘ၀မှာ ဒီတရားစီရင်မှုကို ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလုံးမှာရှိတဲ့ လူတွေကို အထောက်အထား အချက်အလက် ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ ကျမတို့မှာ အကာကွယ်မဲ့နေပါတယ်၊ ဥပဒေအရ ကာကွယ်စောင့်ရှောင့်မှု ပေးနိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး ဆိုတာကို လက်တွေ့ ပြနိုင်တဲ့ဟာက ပါစပ်နဲ့ပြောတာနဲ့ မတူပါဘူး”ဟုရှင်းပြသည်။
ဖွဲ့စည်းလိုက်သော ကော်မတီတွင် အမှုဆောင် (၁၈)ဦးပါရှိပြီး ဆက်လက်၍ ပါဝင်လိုသူများကို ဖိတ်ခေါ်ထားပြီး တရားခွင် ကျင်းပမှု ကုန်ကျစားရိတ်များအတွက် နိုင်ငံတကာရှိ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၏ အကူအညီမျှ မယူဘဲ ဂျပန်ရှိ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့အစည်းများစုပေါင်း၍ စားရိတ်စိုက်ထုတ် အကုန်အကျခံကာ တရားရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လူ့အခွင့် အရေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့များ၊ ကုလသမဂ္ဂနှင့် ဂျပန်အစိုးရ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာသို့ ဖြန့်ဝေသွားမည်ကြောင်း သိရသည်။
နအဖစစ်အစိုးရက ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ရာဇ၀တ်မှုများကို ကော်မရှင်တရပ်ဖွဲ့စည်း၍ စုံးစမ်းစစ်ဆေးရန် အီးယူအဖွဲ့ဝင် ဗြိတိန်နှင့် ချက်နိုင်ငံတို့က စတင်တောင်းဆိုပြီးနောက် အခြားအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများအားလည်း ထောက်ခံကြရန် ဘားမားကမ်ပိန်(ယူကေ)က တိုက်တွန်းခဲ့ကာ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် နိုဘယ်လ်ဆုရှင်များက ဦးဆောင်၍ ကြားနာစစ်ဆေးမှုတခုကို ပြီးခဲ့သည့် မတ်လဆန်းပိုင်းက ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး ဂျပန်တွင်လည်း အလားတူ စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းကြခြင်းဖြစ်သည်။
သတင်းမှတ်တမ်း။ သန့်မျိုးထွေး( မိုးသောက်ကြယ်)
သတင်းဓါတ်ပုံ ။ မူရင်း mizzimaburmese
သင်္ကြန်ရေကစားပွဲတွေ လုံခြုံရေး တင်းတင်းကျပ်ကျပ်နဲ့ ကျင်းပ ။
ရန်ကုန်မှာ ဒီနှစ်တော့ ရေကစားမဏ္ဍပ်တွေ ခပ်ကျဲကျဲနဲ့ သိပ်စည်စည် ကားကား မရှိဘူးလို့ ရန်ကုန်မြို့ခံတွေက ပြောပြပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မသင်းသီရိက စုစည်း တင်ပြပေးထားပါတယ်။
“ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းရယ်၊ ပြည်လမ်းရယ် ဒါပဲ။ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမှာ မဏ္ဍပ်အကြီးကြီးဆိုတော့ ၂ ခုပဲရှိတယ်။ ပြည်လမ်းမှာဆိုလည်း မဏ္ဍပ် အကြီးကြီးရှိတယ်။ သံချပ်တွေဘာတွေတော့ မထိုးဘူး။ သမီးသိတာတော့ ဗမာအကနဲ့ ပန်းကုံးတွေစွပ်ပြီးတော့ အဲဒီလိုမျိုးပဲ။ အရင်ကဆိုရင် တနေရာတည်းမှာ စုနေတာ။ အခုတော့ ဟိုနားနည်းနည်း၊ ဒီနားနည်းနည်း အဲလိုဖြစ်သွားတာပေါ့။”
“ပြည်လမ်းမှာတော့ နည်းနည်းဝေးတယ်။ ကန်တော်ကြီးမှာတော့ နည်းနည်းစည်တယ်။ ပြီးရင် မြို့ထဲဘက်ကို သွားရော။ မြို့ထဲမှာလည်း တော်တော်လှမ်းမှ တခု၊ တော်တော်လှမ်းမှ တခု။ နောက် သိမ်ဖြူလမ်းဘက်မှာ နည်းနည်းရှိတယ်၊ ကန်တော်ကြီးဘက် ဆက်လျက်ပေါ့။ အဲဒီဘက်တွေက နည်းနည်းစည်တယ်။ တခြားနေရာတွေမှာတော့ မရှိဘူး။ နေပူကြီးထဲမှာ ကားက မောင်းမောင်း၊ ပြီးတော့ မဏ္ဍပ်လေးတွေ့ရင် ရေပက်ခံ၊ မဏ္ဍပ်က ကျဲတော့။”
မနေ့က သင်္ကြန်အကြိုနေ့မှာတော့ နေပြည်တော်ဘက်မှာ မဟာသင်္ကြန် ရေသဘင်ပွဲ အခမ်းအနား ဖွင့်ပွဲတွေ ကျင်းပပြီး နာမည်ကြီး အဆိုတော် တော်တော်များများကိုလည်း နေပြည်တော်က မဏ္ဍပ်တွေက ငှားရမ်းထားတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ မြန်မာစစ်အစိုးရထုတ်တဲ့ သတင်းစာထဲမှာတော့ ရန်ကုန် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးနဲ့ အရေးကြီးတဲ့ တချို့နယ်မြေတွေကို ရေ ၂၄ နာရီ ပေးထားမယ်လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အများစု မြို့နယ်တွေက ရေသိပ်မရလို့ သိပ်မစည်ကားသလို ယူနီဖောင်းဝတ် အများအပြားကိုလည်း လုံခြုံရေးချထားတာ တွေ့ရတယ်လို့ မြို့ခံတဦးက ပြောပါတယ်။
“သူတို့က လုံခြုံရေးတွေ ချထားတာခင်ဗျ။ စွမ်းအားရှင်လိုပဲ၊ သူတို့က ယူနီဖောင်းတခု ၀တ်ထားတယ် အပြာတွေ။ တံဆိပ်မတပ်ထားတော့ ဘာယူနီဖောင်းမှန်းတော့ မသိဘူး။ မီးသတ်တို့၊ ရဲတို့ ချထားပါတယ်။ သူတို့လူတွေပဲ များပါတယ်။ ပြည်သူကတော့ အဲဒီထဲကို သိပ်မတိုးချင်ကြဘူး။ အပြာဝတ်တွေ များတယ်။ အရင်လို ပျော်ပျော်ပါးပါး သိပ်မရှိကြဘူး။ နှစ်သစ်ကူး အတာသင်္ကြန်မှာ အညစ်အကြေးတွေ ဆေးတဲ့ ရေကစားတဲ့ နေရာမှာ ရေကလည်း မလာတဲ့အခါကြတော့ တယောက်နဲ့တယောက် မူးပြီး သောက်စား၊ နောက်ပြောင်ပြီး သီချင်းတွေဆို၊ ကတယ်။ အဲဒါပဲရှိတယ်။ ဟိုးအရင်နှစ်တွေနဲ့တော့ မတူတော့ဘူးဗျ။”
အထူးသဖြင့် ဒီနှစ်တွေထဲမှာ စီးပွားရေး ကျပ်တည်းတာမို့ အလည်အပတ် သိပ်မရှိကြသလို ရပ်ကွက်နဲ့ မြို့နယ်တွေထဲမှာလည်း သင်္ကြန် အလှူဒါန ပြုတာမျိုး သိပ်မတွေ့ရဘူးလို့လည်း ပြောပါတယ်။
“မနှစ်ကနဲ့ စာရင်တော့ မစည်ဘူး၊ ဟိုးနှစ်တွေကနဲ့ စာရင်တော့ ပိုဝေးတာပေါ့။ အခုက ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ ရေပက်ခံ ထွက်မယ်ဆိုလည်း ပိုက်ဆံနဲ့၊ ရေပက်မယ်ဆိုလည်း ပိုက်ဆံနဲ့၊ ရေပက်မဏ္ဍပ်မှာ ရေတက်ပက်ချင်ရင်လည်း တနေ့ကို ၃၀,၀၀၀၊ ၄၀,၀၀၀ အဲလိုမျိုးပေါ့။ ရေပက်ခံ ထွက်မယ်ဆိုလည်း ကားငှားရတာ ကားခက တသိန်းနဲ့ တသိန်းခွဲကြားမှာရှိတယ်။ အဲတော့ ရေပက်ခံထွက်မယ်ဆိုလည်း ပိုက်ဆံရှိမှ၊ ရေပက်ချင်ရင်လည်း ပိုက်ဆံရှိမှ အဲလိုဖြစ်နေတယ်။ မုန့်လုံးရေပေါ်တို့ ရွှေရင်အေးတို့ဆို ဒီနှစ် ဝေမယ့်လူ တယောက်မှမရှိဘူး။ ကျန်တဲ့ဟာ ဘယ်သူမှ လုပ်တာလည်း မတွေ့ဘူး၊ ဝေတာလည်း မတွေ့ဘူး။”
“သင်္ကြန် ရေကစားဖို့ ပစ္စည်းလေးတွေတောင်မှ ကျနော်တို့ ၀ယ်မပေးနိုင်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျနော် ၀မ်းနည်းပါတယ်၊ ကျနော်တို့က စားဝတ်နေရေး လုံးပန်းနေရတဲ့အတွက် သင်္ကြန်မှာပျော်ဖို့ ကလေးတွေအတွက် မပံ့ပိုးနိုင်တာကို ကျနော်တို့ ၀မ်းနည်းပါတယ်။”
ရန်ကုန်သင်္ကြန်ပွဲအကြောင်း မြို့ခံတွေ ပြောပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မန္တလေးဘက်မှာဆိုရင်လည်း အရင်နှစ်တွေကလို ကျုံးဘေးမှာ သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်အကြီးတွေ သိပ်မရှိပေမဲ့ ဒီနေ့ အကျနေ့မှာတော့ စည်စည်ကားကား ရှိခဲ့တယ်လို့ မန္တလေးမြို့ခံတွေက ပြောပါတယ်။
မူရင်း ။ VOA News,
နှစ်ကူးချိန် အတာသင်္ကြန်ရောက်တိုင်း အမိမြေကို အရမ်းလွမ်း အရမ်းသတိရပါသည်။
Posted by PNSjapan at 10:19 PM0comments
နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၉ ခုအနက် တအာန်း (ပလောင်) ပါတီလည်း မှတ်ပုံတင် ။
Sunday, 11 April 2010 21:52 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ထံ မှတ်ပုံတင်သည့် နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၉ ခု အနက် တအာန်း (ပလောင်) ပါတီလည်း မှတ်ပုံတင် သည့် နိုင်ငံရေးပါတီအသစ်ထဲတွင် တခုပါဝင်ကြောင်း စုံစမ်း သိရှိရပါသည်။
“ပလောင်ပါတီလဲ ၈ ရက်နေ့တုန်းက မှတ်ပုံတင်တယ်၊ ပါတီဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ဥက္ကဌ က မိုင်အိုက်မုန့်”- ဟု ထိုင်းနယ်စပ်နေ တအာန်းခေါင်းဆောင် မိုင်အိုက်ဖုန်းက ပြောသည်။
ဧပြီ ၈ ရက်နေ့အထိ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံ မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ပါတီများတွင် သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက် တစ်ပါတီ နှင့် တအာန်း (ပလောင်) နိုင်ငံရေးပါတီသစ်ဖြစ်လာမည့် မိုင်အိုက်မုန့်ခေါင်းဆောင် Plaung National Party (PNP) တို့ပါဝင်လျှင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၉ ခု ရှိကြောင်း၊ ပါတီဟောင်း ၃ ခု နှင့် ပါတီအသစ် ၁၆ ခုတို့ဖြစ် ကြောင်း ကြားသိရသည်။
မိုင်အိုက်မုန့် ၆၃ နှစ် သည် သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မန်တုံမြို့ ဇာတိဖြစ်ပြီး သျှမ်းပြည်တော်လှန်ရေး စတင်ချိန်မှ စ၍ ပလောင် ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တွင် ပါဝင်လာခဲ့သူတဦးဖြစ်သည်။ ၁၉၉၁ အပစ်ရပ်စဉ် ဦးဆောင် သူဖြစ်သကဲ့သို့ ၂၀၀၅ လက်နက်ချရန်ဖိအားပေးခံရစဉ်ကလည်း အကြီးအကဲဖြစ်သည်။
“ မိုင်အိုက်မုန့် ဦးဆောင် နိုင်ငံရေးပါတီသစ်က အခုဘဲ မှတ်ပုံတင်ထားတယ်လေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ အဖြစ်အသိအမှတ်ပြု မခံရသေးတော့ သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက်ကိုလဲ တရားဝင်ထုတ်မပြောသေးဘူး၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဘယ် နှစ်ယောက်၊ မဲဆန္ဒနယ် ဘယ်နှစ်နယ်ကနေ ၀င်ပြိုင်မယ်ဆိုတာ မသိရသေးဘူး” - ဟု ပလောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက် ရေးတပ်ဦး PSLF ဥက္ကဌ မိုင်အိုက်ဖုန်း ကပြောပါသည်။
နအဖ ၏ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ့်ဆန်မြို့နယ် နှင့် မန်တုံမြို့နယ် ၂ မြို့နယ်အား ပလောင်ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးထားသည်။
ပလောင်အမျိုးသားများသည် ၁၉၅၉ ရှမ်းပြည် တော်လှန်ရေး စတင်ချိန်မှစ၍ သျှမ်းအမျိုးသားများနှင့်အတူ လက်တွဲ လာခဲ့၏။ ၁၉၆၂ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း အာဏာသိမ်းပြီးနောက် သျှမ်းတော်လှန်ရေးတပ်မှ ခွဲထွက်ပြီး အမျိုးသား တန်းတူရေးအတွက် ၁၉၆၃ ဂျန္ဖ၀ါရီလ ၁၂ ရက်နေ့က ပလောင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်အဖြစ် သီးခြား ရပ်တည်ကာပလောင်တော်လှန်ရေး နေ့ဟု အစွဲပြုသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။
သျှမ်းပြည် လူထုခေါင်းဆောင်များနှင့် စော်ဘွားများ စည်းရုံးမှုရရေးအတွက် သျှမ်းပြည် စော်ဘွားများကောင်စီ ပလောင် စော်ဘွား ခွန်ပန်းစိန်က ဦးဆောင်ဦးရွက် ပါဝင်ခဲ့သောကြောင့် ဖေဖေါ်ဝါရီ ၇ ရက် သျှမ်းပြည် အမျိုးသားများနေ့မှ ၁၉၄၇ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၂ ရက် ပြည်ထောင်စုနေ့ဖြစ်သို့ တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့သည်။
သတင်းမှတ်တမ်း ။ မူရင်း ( သျှမ်းသံတော်ဆင့် )
Posted by PNSjapan at 9:55 PM0comments